किन चीन’ कोरोना भाइरस’को औषधी पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन? | पहिलो बोली
किन चीन’ कोरोना भाइरस’को औषधी पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन?
एउटा भाइरस, जुन अहिलेसम्म विज्ञानमै थाहा थिएन,त्यसैले चीनमा विनाश निम्त्याउँदैछ। अब यो भाइरस विश्वका अन्य धेरै देशहरूमा पनि पुगेको छ।
गत वर्षको डिसेम्बरबाट फैलिन शुरु भएको भाइरस चीनको वुहान शहरबाट फैलिदैं अहिले अन्य देशमा पनी त्रासदी मच्चाईरहेको छ।
चीनमा यस कारणका कारण १३२ भन्दा बढी व्यक्तिको मृत्यु भएको छ। वुहान शहर बाहेक बेइजिंगमा पनि यस संक्रमणको एउटा घटना फेला परेको छ, जस पछि बेइजिंग प्रशासनले मानिसहरूलाई सकेसम्म बढी यात्रा नगर्न अपील गरेको छ।
रहस्यको कुरा के भने,जर्मनी र जापानमा कोरोना भाइरसका घटनाहरू चीनमा कहिल्यै नगएका व्यक्तिमा पनी भेटिएको छ।
हंगकंगले पनि यसप्रती कडा प्रतिबन्धको घोषणा गरेको छ। रसियाले चीनसँगको आफ्नो अधिकांश सीमा पूर्ण रूपमा बन्द गरिसकेको छ।
आखिर किन चिन अहिलेसम्म यस रोगको उपचीर पद्दती पत्ता लगाउन सकिरहेको छैन?यस रोग लागेको मानिसमा एन्टीबायोटिक्सले पनी कुनै काम नगर्ने भएको हुनाले यस रोगको औषधी आविष्कार थप जटिल र चुनौतीपुर्ण रहेको बताईएको छ।